GISSAPA (INDENPANDENT ARAKAN NATIONAL NEWS AGENCY): ဦးသိန်းစိန်ခေတ် ရခိုင်ပြည်ကို မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နေပြီ
ဦးသိန်းစိန်ခေတ် ရခိုင်ပြည်ကို မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နေပြီ
Oct 19, 2011, Time 2; 30 PM.
ဦးသိန်းစိန် ခေတ်သစ်စစ်အုပ်စုခေတ်တွင် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်အားကောင်းလာနေသော မုန်တိုင်းတခုမှာ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းကစတင်ကာ ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက် ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ရခိုင်ပြည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်နှင့် စစ်တွေမြို့နယ်များတွင် မုန်တိုင်းနှင့်အတူ မိုးရွာနှုန်း(၈၀)အထိ သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလျှက်ရှိနေပြီး ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသအတွင်းပါ မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်အတူ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လျှက် ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့ တိုက်ခတ်နေသည့် မုန်တိုင်း၏အရှိန်မှာ တနာရီလျှင် မိုင်ပေါင်း (၅၀ မှ ၆၀)အထိ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိုးရေချိန်ပါ မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ စစ်တပ် စစ်စခန်းများမှာ ယခုနှစ်လေပြင်းမုန်တိုင်းများကြောင်း အပျက်အစီးများပြားခဲ့၍ ယမန်နေ့က စတင်ပြီး ကြိုတင်ကာ မုန်တိုင်းကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုသူ နစကတပ်ကြပ်တဦးက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ရခိုင်ပြည်သို့ မုန်တိုင်းဝင်ရောက်မည့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း၌ နေထိုင်လျှက်ရှိနေသော ပြည်သူလူထုများသို့ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် တစုံတရာ သတိပေးမှုများ မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by VOICE OF GISSAPA at 1:40 AM
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နှစ်နိုင်ငံ အစည်းအဝေး တိုးမြင့်လုပ်ဆေ...
ပခုက္ကူမြို့ ရွှေချောင်း ရေကြီး ရေလျှံမှု လူ ၃၀၀ ထက်မ...
ဘင်္ဂလာရောက် ရခိုင်နိုင်ငံရေး၊ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း...
သိန်း ၃၀ ကျပ်တောင်းသည့် နစက သိန်း ၂၀ ကျပ်ဖြင့် ဘင်္ဂ...
ဘင်္ဂလာသို့ ရခိုင့်သစ်တင်ပို့သူ ရခိုင်အမျိုးသားတဦးေ...
ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ ဆရာကြီး ဦးဦးရွှေဇံ ( ၈၃ ) နှစ...
ဦးသိန်းစိန်ခေတ် ရခိုင်ပြည်ကို မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ေ...
စစ်အုပ်စု၏ ထောင်အတွင်း (၄)နှစ် အကျဉ်းခံရပြီး လွတ်ေ...
RNDP၏ ARAKAN အမည်အား အလွဲဥုံးစားပြုခံရမှုအား ကန့်ကွ...
မြန်မာ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တာကာ (၁၈)သိန်းတန်ဖိုး ဘင်္ဂလာတွ...
RFA အသံလွှင့်ဌာနက ၁၄-၁၀-၂၀၁၁ နေ့ထုတ်လွှင့်လားရေ သမ...
OPEN LETTER TO THE SECRETARY GENERAL OF UNO (OBJEC...
စုစုပေါင်း ၁၄၈ ဦး လွတ်မြောက်လာပြီ
မြန်မာ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဘင်္ဂလာတွင် တန်ဖိုး ၆၇ သိန်းဖမ်...
ကုလားများထံ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကလိမ်ကျခံနေရသော Arak...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာနှစ်နိုင်ငံ တပ်မှူးအဆင့် ပုံမှန်အစည်းအေ...
August update – Kaladan Development Update
Militarisation and human rights abuse in Arakan St...
Communication and transportation in Arakan State
Who GivesaDam About Arakan? AHRDO!
ဒေါ်စုနှင့် နော်ဝေးဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တွေ့ဆုံေ...
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပြင်ဆင်ရန် ...
ဥပဒေနှင့်အညီ အင်န်အယ်လ်ဒီ မှတ်ပုံတင်လျှင် အစိုးရက ...
ရခိုင်ပရန်ဆရာတဦး ၁၀ နှစ်အတွင်း ဘုရားရုပ်ထုတော်ပေါင...
DAW AUNG SAN SUU KYI HAS BECOME A MOUTH PEACE OF T...
ရခိုင်ပြည်နှင့် လူမျိုးများ၏ လောကမဉ္ဖူဘုရားဌာပနာများ
မြောက်ဦးမြို့တော်မှ ရွှေဆင်းထုတော်တဆူ ရွှေအတိ(၄)ပိဿာနှင့် (၆၄)ကျပ်သား၊ ကြေးဆင်းထုတော်(၂၃)ဆူ၊ ကျောက်ဆင်းထုတော်(၂)ဆူ၊ ရွှေဆင်းထုဥာဏ်တော်ငယ်(၁)ဆူ၊ ဓါတ်တော်ဌါပနာအဖြစ် ဥာဏ်တော်ငယ်ဘုရားဆင်းထုတော် (၂၀၀)ဆူ၊ ကြေးမန်တိုင်က(၂)ခု၊ ရွှေမန်တိုင်(၂)ခု၊ စိန်မန်တိုင် (၁)ခု၊ အုပ်ခွက်ဘုရား (၁)ခု၊ စကျင်ကျောက်ဘုရား (၂)ဆူအပြင် တခြားရှေးဟောင်း ရခိုင်အမွေအနှစ်များကို မေလ(၃)ရက်နေ့က တူးဖေါ်ရရှိခဲ့သည်။
NUPA ဗဟိုခေါင်းဆောင်များ တပ်မှူးများနှင့် KNU ဗဟိုခေါင်းဆောင်တပ်မှူးများအား အန္ဒိယမှ ကြံစဉ်မှု မပြုလုပ်
NUPA ဗဟိုခေါင်းဆောင်များ တပ်မှူးများနှင့် KNU ဗဟိုခေါင်းဆောင်တပ်မှူးများအား အန္ဒိယမှ ကြံစဉ်မှု မပြုလုပ်ခင် NUPA ဗဟိုဋ္ဌာနချုပ်စခန်း (တြိဂံနယ်မြေ)အတွင်း အမှတ်တရ အတူတွေ့ရသည့် ပုံရိပ်လွှာ။
ဇူလိုင်လ ၇ ရက် အခန်းအနား ခွင့်ပြုမှာမဟုတ် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဒုသမ္မတ တစ်ဦး တင်မြှောက်ရမည် ...
သစ်ထူးလွင် အကြမ်းဖက်ဆူပူသူများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည် ပစ်ခတ်ခြင်းမရှိသေး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးကို ကြံ...
မြန်မာ မူဆလင် အမတ် မူဆလင်များကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် လုပ်ဆောင်သွားမည့်ဟုပြောဆို
ဂစ္ဆပသတင်းဌာန မေလ (၄) ရက်၊ ၂၀၁၁။ http://gissapa.blogspot.com မြန်မာ မူဆလင် အမတ် မူဆလင်များကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် လုပ်ဆောင်သွားမည့်ဟြုေ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ လူ (၃၀၀၀)ခန့် ပါဝင် ပုသိမ်ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြသူများ ဒဏ်ငွေချမှတ်ခံရ ...
သီတာထွေး၏ သင်္ခန်းစာ / အသင်တော်လီ မျိုးပျက်လီ
သီတာထွေး၏ သင်္ခန်းစာ မသီတာထွေးကား ဆုံးပါးသွားခဲ့လေပြီ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင်္ခန်းစာပေါင်...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွပ်မြောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအထဲတွင် -၈၈- ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်- ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထ...
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၃နာရီခန့်က မြောက်ဦးမြို့ နန်းတော်ရာကုန်းမှ ဆန္ဒပြမှု သတင်း.. (Breaking News) ဇွန်လ (၄)ရက်၊ ၂၀၁၁။ မြောက်ဦြး...
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု ကည်နှင့် အီမြောင်ဘတ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဖားကန့်မြို့နယ်တစ်ခွင်က လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးပြသာ...
သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေသည့် Independence စာစောင် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံသူများ အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုင်းသတင်းစာများမှ ကူးယ...
ကြောင်က ခွီးဆရာ (ဗီဒီယို ဟာသ)
ရခိုင်အာဇာနည် (စစ်မှန်သော တော်လှန်ရေးသမား ခေါင်းဆောင်ကြီး) ဥက္ကဌ ခိုင်မိုးလင်း
ရခိုင်ပြည်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ တည်နိန်ရာ မြေပုံအညွှန်း
ရခိုင်ပြည်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများတည်နိန်ရာ မြေပုံအညွှန်း
ANC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တပ်ပေါင်းစုတည်ဆောက်ရေး ညီညွတ်ရေးကို ဇောင်းပီးလုပ်ဆောင်ဖို့ပြောဆို
Freedom Fighters (FFs) ရခိုင်-ကရင် ၃၄ ဦး အမှတ်တရမြင်ရပုံ။
စစ်မှန်သည့် တော်လှန်ရေး-နိုင်ငံရေး ရဲဘော်ရဲဘက်ရင်းများ ဖြစ်ကြည်သည့် ရခိုင်-ကရင်(၃၄)ဦး အလျှင်အမြန် လွတ်မြောက်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါ။
Arakan Army's Navy
ရခိုင်ပြည်သူလူထုတခုလုံးနှင့် ပတ်သက်သည့် Site များ
VOICE OF GISSAPA
ဂစ္ဆပသတင်းဌာနမှ လိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။ ဤဌာနသည် လွတ်လပ်သော တရားမျှတရေး၊ အဆင့်တိုင်းတန်းတူရေး၊ သတင်းလွတ်လပ်စွာ ရယူရေးသားပိုင်ခွင့်နှင့် ဖြန့်ချီပုံနှိပ်ထုတ်ဝီပိုင်ခွင့် အပြည့်အရလိုလားကြသူများ စုစည်း၍ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် များရရှိရေးကို တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော အခြေခံလူ့အခွင့် အရေး မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကြသူများ၏ ရင်ခွင်အဖြစ်တန်ဖိုး ထားကြသည့် ဌာနဖြစ်သည်။